11, 12. Gịnị mere ndị mmadụ ịmụta na ha nwere ike ikpere Jehova ekpere ji bụrụ ozi ọma? 11 Ọtụtụ ndị na-ekpe ekpere n’ihi na ọ na-eme ka obi dị́ ha mma, ma ha ekwetaghị na Chineke na-anụ ekpere ha. Ha kwesịrị ịmata na Jehova bụ “Onye na-anụ ekpere.” Ọbụ abụ bụ́ Devid dere, sị: “Gị Onye na-anụ ekpere, ọ bụ gị ka anụ ahụ́ niile bụ́ mmadụ ga-abịakwute. Njehie m dị ọtụtụ nke na agaghị m ebuli ya.”—Ọma 65:2, 3.
mailto:?body=Na-ekwusa Ozi Ọma Gbasara Obiọma Chineke nke Na-erughịrị Mmadụ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2016523%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Na-ekwusa Ozi Ọma Gbasara Obiọma Chineke nke Na-erughịrị Mmadụ